‘१०.२५ प्रतिशत एनबीबीएल डिबेन्चर २०८५’ निश्कासन खुल्ला| Corporate Nepal
‘१०.२५ प्रतिशत एनबीबीएल डिबेन्चर २०८५’ निश्कासन खुल्ला
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले जेठ १० गते शुक्रबारदेखि २० लाख इकाई ऋणपत्रको बिक्री खुला गर्ने भएको छ । यसमध्ये १२ लाख युनिट डिबेन्चरले हुन आउने कुल रु. एक अर्ब २० करोड ऋणपूँजी रकम विभिन्न व्यक्ति वा संघ संस्थाहरुलाई व्यक्तिगत तवरको माध्यमबाट तथा आठ लाख युनिट डिबेन्चरले हुन आउने कुल रु. ८० करोड ऋण पूँजी रकम सर्वसाधारणको लागि सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागिएको हो ।
सर्वसाधारणको लागि छुट्टयाएको मध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ४० हजार युनिट डिबेन्चर सामुहिक लगानी कोषहरुको लागि समेत छुट्टयाईएको जनाएको छ ।
बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको नाम ‘१०.२५ प्रतिशत एनबीबीएल डिबेन्चर २०८५’ रहेको छ । उक्त ऋणपत्रमा वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरिने छ भने ब्याज रकमको भुक्तानी भने अर्ध वार्षिक रुपमा गरिनेछ ।
साथै, उक्त ऋणपत्र १० वर्षमा परिपक्क हुनेछ । उक्त निश्काशनको बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंङिक रहेको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रतियुनिट १ हजार रुपियाँका दरले न्यूनतम २५ देखि १ लाख युनिटसम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ऋणपत्र नेप्सेमा सूचिकृत हुने भएकोले आवश्यक पर्दा सहज रुपमा खरिद बिक्रीगर्न सकिने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितो राखि कर्जा समेत लिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
उक्त ऋणपत्रको लागि छिटोमा जेठ १४ गते र ढिलोमा असार ८ गते सम्म आवेदन दिन सकिन्छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालय तथा सी–आस्वाको माध्यमबाट आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त ऋणपत्रलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले औसत जोखिम जनाउने ‘एलबीबीबीप्लस’ रेटिङ दिएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा खुद मुनाफा रु. १.१४ अर्ब, निक्षेप संकलन रु. ५६.०६ अर्ब र कर्जा लगानी रु. ५३.२५ अर्ब रहेको छ । बैंकले ९० शाखा, ७ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ७२ वटा एटीएमबाट बैंकिङ सुविधा दिंदै आएको जानकारी गराएको छ ।